Inona no atao hoe Wiki? Horonan-tsary | Martech Zone
Inona no atao hoe Wiki? Horonan-tsary
Asabotsy Jolay 7, 2007 Talata, Septambra 1, 2015 Douglas Karr
Asa-tanana mahazatra dia tonga tamina horonantsary mahafinaritra iray hafa, Wikis In Plain English. Gaga aho amin'ny tsy fahalalan'ny Wikis amin'ny raharaham-barotra. Ny olona dia mbola mandray an'i Wikis ho toy ny 'zavatra ataon'ny ankizy' amin'ny raharaham-barotra raha mety ho teknolojia mahafinaritra azo ampiasaina izany.
Raha mieritreritra mailaka, fivoriana ary antso an'arivony an'arivony aho no azoko nandritra ny taona mba hanazavana ireo fiasa sy ny fomba fiasan'izy ireo, wiki iray no ho valiko hametraka foibe fahalalana afovoany ho an'ny serivisy mpanjifa na tranokalan'ny mpanjifa. Jereo ny horonan-tsary ary eritrereto ny fomba azo ampiasana azy amin'ny orinasao:
Raha te hijery azy ianao, ny horonan-tsary farany navoakako Tao ny asa tanana mahazatra RSS.
Satroka tendron'ny Jeffro 2pt0 amin'ny fitadiavana ilay horonantsary ary tsipìka manampy ahy amin'ny Blogroll!
Tags: inona ny wikiWikihoronantsary wiki
Tipping Blog: Auctions PGA
Jul 8, 2007 amin'ny 5: 14 AM
Misaotra indrindra amin'ny fanonona sy ny fitiavana rohy.